The Irrawaddy's Blog: ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လိုက်ပို့တဲ့ ဦးလွင်၏ ဇနီး နာရေး မြင်ကွင်းဓာတ်ပုံ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လိုက်ပို့တဲ့ ဦးလွင်၏ ဇနီး နာရေး မြင်ကွင်းဓာတ်ပုံ
၁၂.၁၁.၂၀၁၀ (သောကြာ) နေ့ ည (၉း၀၀) နာရီအချိန်၌ ဘဘဦးလွင်၏ ဇနီးဒေါ်တင်တင်မလေးအသက် (၈၈) နှစ်သည် ဘ၀တပါးသို့ ပြောင်းလဲသွားသည်။
သရုပ်ဆောင် ဦးကျော်သူ ဦးစီးသည့် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)မှ ၁၄. ၁၁. ၂၀၁၀ (တနင်္ဂနွေ) နေ့ ညနေ (၃း၀၀) နာရီအချိန်တွင် ရန်ကုန်မြို့ အမှတ် ၁၅၊ ကမ္ဘောဇရိပ်သာ၊ ဗဟန်းမြို့နယ် နေအိမ်မှာ ရေဝေးသုဿန်သို့ သယ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။
ယင်းဈာပနအခမ်းအနားတွင် ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်နှင့် ဘဘဦးတင်ဦးတို့သည်လည်းဘဘဦးလွင်အား လာရောက်ဂါရ၀ပြု အားပေးစကားပြောကြားကာ ရေဝေးသုဿန်အထိ လိုက်ပါပို့ဆောင် ပေးခဲ့ပါသည်။
ko myo said... :
မင်းပေးပို့တဲ့ ဓါတ်ပုံကြည့် ရတာ ချမ်းသာပြီး ရင်ထဲ က အပြည့် အ၀ ခံစားမိပါတယ်.. ငါတို့ ညီအစ်ကို တစ်တွေ စည်းရှုံစွာ ချစ်ခင်နေတဲ့ ပုံကို ပါ ကွာ . အမေစု ကျန်းမာပါစေ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံ တော်ကြီး အမြန်ရပါစေကွာ..